Author Topic: Rajesh Hamal - Photos and Profile (Read 74487 times)
« on: August 08, 2009, 08:27:33 AM »
This topic has moved to main site
« Last Edit: March 17, 2015, 01:15:42 AM by anand »
« Reply #1 on: August 08, 2009, 09:32:56 AM »
Born on June 9, 1964 in Palpa, Nepal
He started his career with the movie "Yug Dheki Yug Samma" in 1994
Intelligent, well spoken and down to earth, Rajesh Hamal is 'the' Nepali hero. Starring in more than 180 Nepali movies and evenaPakistani movie, Rajesh isafavorite among the masses as well as the class. A gold medalist in English literature, Rajesh stand apart in body and in nature from the rest of the Nepali actors.
उनै नायक, नेपाली सिने दुनियाँमा डेढ दशक यता निरन्तर स्थापित छन् । 'युगदेखि युगसम्म' बाट थालेको अभिनय यात्रा 'ट्रयाक्सी ड्राइभर'सम्म आइपुग्दा उनि अभिनित सिनेमाको संख्या १ सय ७५ नाघिसकेछ । ढल्किदो उमेरले पछिल्लो समयमा केही प्रभावित पारेको त छ । यद्यपी लामो अनुभूति र अनुभवले नयाँ सम्भावनातिर पनि उत्तिकै डोर्‍याएको छ ।
फिल्मनेपाल डट कमका लागि लक्ष्मण सुवेदीले गरेको कुराकानी :
लामो समय सिनेमाकै लागि खर्चिनुभो, कस्ता अनुभूति बटुल्नुभो ? अलिकति बाढौं न ।
अभिनययात्रा थालेको सोह्र-सत्र वर्ष नाघिसकेछ । सुरुवातका दिनमा निरन्तरतकाकै चिन्ता थियो, टिक्न सकिने हो या होइन भन्ने । यति लामो यात्रामा निरन्तर लाग्न सकेकोमा अहिले खुशीको अनुभूति त पक्कै छ । तर, सबै कुरामा सन्तुष्ट हुने ठाउँ भने छैन । उ बेला थोरै संख्यामा सिनेमा बन्थे । पछि संख्या बढ्दै गयो । तर, स्तर खासै बढेको छैन । यतिका वर्ष पछि पनि हामी उस्तै प्रविधिमा उनै कथाबस्तुमा सिनेमा बनाउँछौं । यसैमा उदेक लाग्छ ।
पछिल्लो दशकमा नायककै रुपमा थुप्रै युवा सिने दुनियाँमा भित्रिए । टिकिरहन भने सबैजसोलाई हम्मे पर्‍यो । तर, तपाई भने डेढ दशकसम्म स्थापित रहिरहनु भयो । गुदी कुरा के हो ?
कलाकारिता आफैमा असुरक्षित पेशा हो । कुनै कालखन्डमा कसैले अवसर पाउनुले यो अर्थ राख्र्दैन कि उसले सधैं आफुलाई टिकाइरहन सक्छ । समय र भाग्यको पनि तालमेल हुनुपर्छ । यो अर्थमा म आफुलाई निकै भाग्यमानी ठान्दछु । यतिका वर्षसम्म पनि दर्शकहरुले एकैनाश मनपराएका छन् । साँच्चै, कलाक्षेत्रमा अचम्मको प्रजातन्त्र छ । हैकमले हैन दर्शकले मन पराए मात्र टिक्न सकिन्छ । राजनीतिमा भन्दा पनि शुद्ध प्रजातन्त्र ।
आफ्नै अभिनयमा कत्तिको सन्तुष्टी लाग्छ ?
आफ्नो भूमिका भएका सिनेमालाई बस्तुगत रुपमा मुल्यांकन गर्ने गरेको छु । अहो, मेरो अभिनय छ भन्दा पनि समग्रमा सिनेमा कस्तो बनेको छ भन्नेमा महत्व दिन्छु । कुनैमा राम्रो पनि हुन्छ र कुनैमा त्रुटि पनि । प्रायः आफ्नो कामबाट असन्तष्ट नै बढि छु । निर्माण सकिएपछि अलि बढि समय दिन पाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ ।
नायककै रुपमा यतिका वर्ष विते । अब त बिश्राम लिने बेला भएन र ?
बिश्राम त नचाहेर पनि ढिलो चाडो लिनै पर्छ । तर, यतिका वर्ष लागिपरेको क्षेत्र चटक्कै छोडन भने सजिलो छैन । नायकको रुपमा त भन्न सकिन्न तर निर्देशकको रुपमा भने हातखुच्चा चलेसम्म काम गर्ने धोको छ ।
उसो भयो नायक राजेश हमाललाई अबका दिनमा निर्देशकका रुपमा चिनिने छ ?
अभिनयपछिको मेरो रुचि नै निर्देशन हो । मनसिक रुपमा सिनेमा निर्देशनको लागि तयार भइरहेको छु । मात्र अनुकुल समयको पर्खाइमा छु । अहिले अभिनेताकै रुपमै ब्यस्त छु । निर्देशन थालेपछि एउटै सिनेमाका लागि सात-आठ महिना खर्चिनुपर्छ । अहिले यति समय मसँग छैन । यद्यपी प्रारम्भीक तयारी थालीसकेको छु । थुप्रै कथा छानैटमा छन् । त्यसमध्ये एउटाको लागि गृहकार्यमा जुटेको छु ।
सुरु चाँही कहिलेबाट गर्ने त ?
इच्छा त यसै बर्षभित्र सुरु गर्ने छ । आफूले निर्देशन गर्ने चलचित्रमा आफै नायक बन्ने सोच पनि छ । ढिलो भयो भने मेरो जवानीले साथ नदेला की भन्ने पनि डर छ । प्राविधिक रुपमा अलि स्तरिय सिनेमाको निर्देशन यसै वर्ष सूरु गर्छु ।
भरखरैको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सबैक्षेत्रबाट उत्रिए । केही सिनेकर्मी पनि थिए । तर, तपाईलाई त देखिएन नि ?
कलाकारको हिसाबले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मेरो आफ्नै तरीकाले समर्थन थियो । किनकी सबैभन्दा बढी प्रजातन्त्र त हामी कलाकारहरुलाई चाहिन्छ । आफ्नो पेशा, स्थानबाट मेरो लोकतन्त्रप्रति पूर्ण समर्थन थियो र छ पनि । सडकमा नउत्रदैमा सर्मथन नभएको भनने होइन ।
पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रम प्रति तपाईको भनाइ के छ ?
राजनीति एकदमै अस्तिर छ । तर पनि केही आशाका किरण देखिएका छन् । जनताले खोजेको शान्तिको बाटोमा देश लम्किसकेको छ । तै पनि ढुक्क भइहाल्न भने सकिँदैन ।
एक्लो जिन्दगी कहिलेसम्म ? अझै लगन जुरेन र ?
बिहे यही उमेरमा नै गर्नूपर्छ भन्ने कहीँ छैन । मेरो आफ्नै बिचारमा अझै पनि बिहेको बेला भएको छैन । हेर्दै जाऊँ, मेरो बिहेको लगन जुर्न पनि सक्छ नजुर्न पनि सक्छ । बिहे नै गर्दिन भन्ने चाहिँ होइन । भए छ भने राम्रै होला ।
« Last Edit: April 18, 2010, 12:42:00 AM by kurakani »
« Reply #2 on: August 08, 2009, 10:49:20 PM »
Yesto pani geet
rajesh hamal and niruta singh
« Reply #3 on: August 14, 2009, 10:00:47 PM »
Rajesh with Karishma
हिरोइनसँग राजेशको दूरी
सन्तोष रिमाल, काठमाडौं, साउन ३०- हिरो राजेश हमालसँग नाच्न हिरोइनहरु हच्किन्छन्। उनी राम्रो नाच्न नजान्ने भएकोले भने होइन। यस विषयमा एउटा कथन छ- 'हिरोइन बोकेर नाचेको बेला नृत्यनिर्देशकले 'कट' भन्दिए भने राजेशले तुरुन्तै हात छाडिदिन्छन् र हिरोइन भुइँमा पछारिनपुग्छे।'
फिल्म 'हो यही माया हो'को सुटिङमा भेटिएका राजेशसँग यो कथनको प्रसंग कोट्याउँदा उनले यसलाई कथनकै संज्ञा दिएर मजाले हाँसे। 'त्यतिसम्म त होइन'- हिरोइनसँग खासै हिमचिम नहुँदा यस्तो टिप्पणी आएको अन्दाज भने उनले तुरुन्तै लगाए- 'अलिकति ठाउँ भेट्यो भने यहाँ किस्सा बन्न समय लाग्दैन।'
सबैभन्दा धेरै हिरोइनसँग सबैभन्दा धेरैपटक अभिनय गर्ने हिरो राजेश नै हुन्। पर्दामा सबैसँग 'प्रेम' गरेका यी हिरोको सम्बन्ध पर्दाबाहिर कुनै पनि हिरोइनसँग घनिष्ट नभएको सुन्दा अचम्म लाग्नसक्छ। तर राजेश भन्छन् 'सुटिङ स्पटबाट हिँडेपछि म कसैको पनि मतलब गर्दिन। सुटिङमै पनि निजी कुरा सुन्न र सुनाउन मलाई मन लाग्दैन।'
पर्दाका सहकर्मीसँग निजी जीवनको कुनै सम्वन्ध नभएको उनले बताए। 'मलाई बाई हार्ट कुनै हिरोइनको फोन नम्बर समेत थाहा छैन। धेरैको घर कहाँ हो परिवारमा को को छन् भनेर पनि सोधेको छैन,'- उनले सहकर्मीसँगको सम्बन्ध बताए। सँगै काम गर्नेको सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्दैन। तर सम्बन्धकै विषयलाई लिएर दर्शकले अकमक्कमा पारेको अनुभव भने यिनीसँग थुप्रै छ।
सुटिङको क्रममा काठमाडौंबाहिर गएको बेला यिनीसँग कसैले निरुता सिंहको फोन नम्बर मागेछन्। 'त्यतिबेला निरुताको नम्वर छैन भन्नुपर्दा भने अलि नमजा लाग्यो,' राजेशले भने- 'मलाई कलाकार साथीसँग काम पर्ने भनेको फिल्म बनाएँ भने मात्र हो। त्यतिबेला जसरी पनि नम्वर पत्ता लागिहाल्छ भनेर कसैको पनि सेभ गरेको छैन।'
अरुका कुरा छाडौं आफूले खेलेको सबैभन्दा धेरै फिल्मकी हिरोइन करिश्मा मानन्धरसँग दोहोरो कुरा गर्न पनि यिनलाई सहकार्यकै साइत जुर्नुपर्यो। फिल्म 'हो यही माया हो'मा करिश्मालाई देखेपछि उनले बोले 'वेलकम ब्याक!' करिश्माले 'थ्याङ्क यु' भनिन्। वर्षौंपछि भेट भए पनि यी दुईको औपचारिकता यतिमै सीमित भयो। बाँकी संवाद भने स्क्रिप्ट राइटरले लेखेको बोले । फिल्मका यी हिट जोडीको यथार्थमा यति पातलो सम्बन्ध!
'सँगै काम गर्दैमा एकदमै घनिष्ट भइन्छ भन्ने छैन। हाम्रो व्यावसायिक सम्बन्ध जमेको छ। भइहाल्यो नि'- राजेशले भने।
कुरा करिश्माको मात्र होइन। अरु हिरोइनसँग पनि राजेशको सम्बन्ध उस्तै छ। धेरै फिल्ममा आफ्नो हिरोइन बनेकी जल शाह अहिले अमेरिकामा छिन् भन्ने सम्म राजेशलाई थाहा छ। तर जलसँग पनि आफ्नो बातचित नभएको उनले बताए। लगभग १८ वर्षदेखि कलाकारहरुसँग दैनिक १० घण्टाभन्दा बढी बित्ने गरे पनि फुसर्द हुँदा अरुसँगै रमाइलो गर्ने यिनको बानी रहेछ।
'मेरा केही स्वदेशी र विदेशी साथीहरु छन्। महिला साथी पनि थुप्रै छन्। फुर्सद मिल्यो भने उनीहरुसँग भेटघाट गर्छु'- उनी अलि होसियार बने- 'तर महिला साथी भनेको विशेष खालको चाहिँ होइन नि ! यसको गलत अर्थ नलागोस्।'
कामका लागि आएको ठाउँमा कसैसँग पनि निजी कुरामा अल्मलिन राजेशलाई उचित लाग्दैन। काममा आएर कम बोल्नुमा यिनले आफ्नै कारण देखाए। 'सुरुमा आफ्नो भूमिकामै बढी केन्द्रित हुँदा अन्त ध्यान गएन। पछि यस्तै बानी बस्यो।' गफमा भुल्दा गम्भीरता गुम्ने र चरित्रमा डुब्न नसकिने हुनाले पनि स्पटमा एक्लै बस्न रुचाउने उनले बताए। तर नयाँ कलाकारले केही सोधे भने सहजै सिकाइदिने गरेको उनले बताए। 'नयाँ कलाकारसँग काम गर्दा स्थिति सामान्य बनाउन मैले धेरै नै सहयोग गरेको छु'- आफुसँग पहिलो पटक काम गर्दा धेरै जना नर्भस हुने गरेको उनले देखेका छन्।
आफ्नो अन्तरमुखी स्वभावको आलोचना भएको जस्तो उनलाई लाग्दैन। 'मेरो हरेकसँग समझदारी छ। दुश्मनीका कारण कसैसँग नबोलेको होइन भन्ने सबैलाई थाहा छ'- भलादमी छवि देखाउन यस्तो शैलीमा प्रस्तुत भएको पनि होइन भन्छन् उनी।
चल्तीमा छँदा हिरोइन सिफारिस गर्ने हिरो निकै छन्। तर आफूले कहिल्यै कसैको सिफारिस नगरेको राजेशले दावी गरे। बरु यस्तो काम गर्नेप्रति रोष प्रकट गरे 'यो एकदमै गैरव्यावसायिक काम हो।' फिल्म खेल्न इच्छा गर्नेलाई प्रक्रिया बताई सहयोग गर्ने कामलाई मात्र यिनी उचित मान्छन्। सिफारिसवाला हिरोइनले गर्दा सुटिङमा धेरैपटक अप्ठ्यारो परेको उनको अनुभव छ।
« Reply #4 on: August 23, 2009, 10:35:15 PM »
अभिनेता भुवन केसीका अनुसार, राजेश र उनी एकै सालका हुन् । विक्रम संवत् ०१५ मा जन्मिएको बताउने उनी पहिलापहिला भएको कुराकानीको आधार नै प्रमाण भएको बताउँछन् । त्यसो त यसअघि नै जन्मिएका अभिनेता शिव श्रेष्ठ र संगीतकार शम्भुजित बाँस्कोटा पनि आफूलाई राजेशसँगैको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, सुरुसुरुमा राजेश सही उमेर बताउँथे । १६ वर्षअघि काम गरेको चलचित्र देउताका निर्माता तथा अभिनेता युवराज लामाले पनि त्यसताका राजेशलाई उमेर सोधेका थिए रे ! भन्छन्, "उतिबेला गरेको हिसाबको अहिले जोडघटाउ गर्दा उनी अहिले ५१ वर्षको हुनुपर्छ ।" तर, सन् १९६४, राजेशले बताउने गरेको आफ्नो उमेर हो ।
आजका मितिसम्म राजेश हमाललाई सबैभन्दा बढी सोधिने दुईवटा प्रश्नमध्ये दोस्रोको जवाफ हो यो । पहिलो प्रश्न बिहेको हो । यी दुवैको जवाफमा राजेश कहिले अमूर्त बन्छन् भने कहिले छल्नतिर लाग्छन् । त्यसैले फ्यानहरू उनले दिने जवाफमा सन्तुष्ट छैनन् । बिहेका सम्बन्धमा भने उनी कमेडी जवाफ दिएर पन्छिन खोज्छन् । एउटा यस्तो समय थियो, जतिबेला राजेश बराबर चर्चामा हुन्थे । पहिलो चलचित्रका रूपमा हस्ताक्षर गरेको भाग्यरेखा -०४४ पुस २७) नायिकासँगको स्क्यान्डलकै कारण उम्कियो । त्यसपछि उनी नांगो फोटो खिचेर चर्चामा आए । नांगो फोटो सार्वजनिक भएपछि उनलाई यस क्षेत्रबाट बिदा गर्नुपर्छ भन्दै चलचित्र क्षेत्रको ठूलै समूह लागिपर्‍यो । कलाकार संघले बहिष्कारको निर्णय नै गर्‍यो । तर, जित उनकै भयो । आफ्नो गाडीले मान्छे किचेर मरेपछि पनि उनले निकै तनावको सामना गर्नुपरेको थियो ।
विभिन्न युवतीहरूसँगको प्रेम सम्बन्ध उनले धेरैअघिदेखि स्वीकार्दै आएका छन् । चण्डीगढ पढ्दा आफूभन्दा केही जेठी युवतीसँगको प्रगाढ प्रेम सम्बन्ध उनले कहिल्यै लुकाएनन् । त्यसको तुलनामा उनी नेपाली नायिकासँगको उठबसका कुरामा बढी गोप्य छन् । पछिल्ला नायिकाहरूसँगको सम्बन्ध टाढा बनाउँदै लगे पनि उनी आफ्नो सुरुवाततिर भने निकै रोमान्टिक थिए । तर, आजका मितिमा उनी पुराना कुरा सम्भिmएर कसैको घर भाँड्ने पक्षमा छैनन् ।
सन् १९८५ देखि तीन वर्ष दिल्लीमा मोडलिङ् गरेको उनी बताउँछन् । त्यताका युवतीहरूमाझ उनले बनाएका सम्बन्धहरू भने बेलाबेला सार्वजनिक भएकै हुन् । अहिले उनको गैरचलचित्रकर्मी साथीहरू र त्यसमा पनि विदेशी मित्रहरूसँगको सम्पर्क र सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । उनी सात दिनसम्म चलचित्रको कामबाट खाली बस्नुपर्‍यो भने विदेश भ्रमणमा निस्किहाल्छन् । बेलायत, जापान, यूके र रुस उनी धेरैजसो जाने देश हुन् । उनको जस्तो विदेश डुल्ने हैसियत अर्को नेपाली कलाकारले बनाएका छैनन् ।
छायांकन स्थलमा उनको चर्चा भिन्न पारामा हुन्छ । उनी छायांकनमा पुगेपछि त्यहाँको मौसम नै परविर्तन हुन्छ १८० डिग्रीको कोणमा । अनुशासन ह्वात्तै थपिन्छ । सबैले अभिभावक आएझैँ व्यवहार गर्छन् । अघिसम्म कुरा काटेर बस्नेहरू तुरुन्त तारपिmमा लाग्छन् ।
« Reply #5 on: August 26, 2009, 10:33:58 PM »
« Reply #6 on: September 02, 2009, 06:53:25 AM »
मन नपर्दा नपर्दै पनि सुपरस्टार
"सुटिङमा उसका लागि घन्टौँ कुर्नुपर्छ । हामी प्रतिको उसको व्यवहार पनि सही छैन ।" नायिका निरुता सिंहले राजेश हमाललाई लक्षित गरेर यस्तो दुःखेसो धेरैपल्ट पोखेकी छन् । निरुता मात्र होइन, अहिले चल्तीमा रहेका सबै नायिकाहरू उनको बेढंगे चाला प्रति आजित छन् र आक्रोश पोख्छन् । उनी नायिकाहरूको अभिवादनसमेत फर्काउँदैनन् ।
छायांकनका बेला नायिकालाई बोकिरहेका राजेश निर्देशकले 'कट्' भन्नेबित्तिकै फ्यात्त भुइँमा छोडिदिन्छन् । नायिका झरेर बजि्रऊन्, घाइते होऊन्, रोऊन् वा कराऊन्, उनी मतलब राख्दैनन् । तर, उनको यो व्यवहारप्रति औँला ठड्याउने नायिका, निर्माता वा निर्देशक आजसम्म कोही देखिएका छैनन् । राजेश हमालले कहिल्यै नाच्न सिकेनन् ।
उनी अभिनय पनि जान्दैनन् । डे्रसअप उनको अर्को कमजोरी हो । असामाजिक छ व्यवहार । यस्ता आरोप कण्ठ गरेर बसेका छन् नेपाली चलचित्रकर्मी । यति भएर पनि चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेको १८ वर्ष बितिसक्दासमेत उनले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । धेरै कमजोरीका बीच पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्र राजेशकै वरपर घुम्नुका पछाडि पक्कै निकै कारणहरू छन् ।
अहिलेकी सर्वाधिक व्यस्त नायिका रेखा थापाले राजेशका नकारात्मक आनीबानी मात्र होइन, उनको मूल्यांकनमा तारिफको झोला समेत भरेर राखेकी छन् ।
चलेका आमनायक आफूले अभिनय गर्ने चलचित्रका लागि हिरोइन छानी हिँड्छन् । निर्माताको कान फुकेर निर्देशक परविर्तन गराउँछन् । राजेशले भने यो पाटोलाई कहिल्यै वास्ता गरेनन् । उनी आफूले अभिनय गर्ने चलचित्रको निर्देशक होस् वा कलाकार मतलब राख्दैनन् । स्क्रिप्टको समेत खोजी गर्दैनन् । आग्रह वा पूर्वाग्रहभन्दा माथि रहेर व्यवहार गर्न सक्नुले उनलाई लामो दौडको घोडा बनाएको रेखाको तर्क छ ।
लामो समयसम्म नायकका रूपमा रहेका राजेशले १ सय ५० जति चलचित्रमा अभिनय गरसिक्दा पनि उनले नाम लिनलायक चलचित्र फेला पार्न भने सकेनन् । उनी यस यथार्थलाई घुमाउरो भाषामा मात्र स्वीकार्छन् । भन्छन्, "केहीको त नाम लिन सकिन्छ ।" देउता, वसन्ती, शंकर आदि उनले लिने गरेका नाम हुन् । तर, उनले लिएका नाममा कतै मौलिकता छैन भने कतै सफलता छैन । संसारका सबै सुपरस्टारहरू सँग नाम लिन लायक केही चलचित्रको सूची हुन्छ नै तर उनी आफूलाई कालजयी बनाउने यही यथार्थभन्दा टाढा छन् ।
अर्को तथ्यांक छ राजेशका चलचित्रको । उनले आजका मितिसम्म निर्मित चलचित्रमध्ये एक्लैले ३० प्रतिशतजतिमा अभिनय गरेका छन् । तर, उनी अभिनीत ५० प्रतिशतभन्दा बढी चलचित्रले लगानी उठाउन सकेका छैनन् । चलचित्र निर्माता संघका सहअध्यक्ष राजकुमार राईको यो विश्लेषणले सोझै भनेको कुरा के हो भने राजेशका बहुमत निर्माता डुबेका छन् । तर, यसको दोष उनको टाउकोमा कसैले खन्याउँदैन ।
राजेश हमालको सफलता र असफलतासँग गाँसिएको उनको लामो चलचित्र यात्रालाई यसभन्दा फरक कोणबाट विश्लेषण गर्ने चलचित्रकर्मीहरू पनि छन् ।
चलचित्र निर्देशक प्रकाश सायमीका विचारमा राजेश हमाल मात्र एक त्यस्ता व्यक्ति थिए, जसले चाहेको भए यस उद्योगकै नाक-नक्सा बदल्न सक्थे, उनमा यो क्षमता र अवसर दुवै थियो तर उनले आफ्नो त्यो प्रतिभालाई परीक्षण गर्न डराए ।
सायमी भन्छन्, "उनले अभिनय यसरी गररिहे, मानौँ उनी टेबलमाथि बसेर जहाज खियाइरहेका छन् । समयले उनलाई साथ दिए पनि समयलाई उनले साथ दिन सकेनन् ।"
त्यसैले आज राजेश हमालले अभिनय गरेका चलचित्रमध्येबाट छानेर उनको कलाकारिताको परीक्षण गर्ने हो भने विशिष्ट खालको एउटा चलचित्रको नामसमेत भन्न गाह्रो पर्छ ।
"अभिनेताका रूपमा उनी चलेका होइनन् किनभने अभिनय गर्ने क्षमता उनीसँग छैन नै भने पनि हुन्छ," अर्का चलचित्र निर्देशक नवीन सुब्बा भन्छन्, "उनले गरेका समग्र चलचित्रबाट कुनचाहिँ स्मरणीय छ भनेर सोध्यो भने सायद हमालले नै पनि सही उत्तर दिन सक्तैनन् ।" यसमा सायमीको सटीक तर्क छ । भन्छन्, "सुरुमा उनले राम्रा चलचित्र खेल्न पाएनन् । र, पछि राम्रा चलचित्र छान्न भ्याएनन् ।"
तर पनि उनी झन्डै दुई दशकदेखि नेपाली चलचित्रको केन्द्रमै छन् । नवीन यसलाई सामाजिक तथा राजनीति दुवै कोणबाट हेर्नुपर्ने आग्रह राख्छन् । जतिखेर राजेश हमाल चलचित्रमा प्रवेश भए, त्यसबेला पञ्चायती सत्ताप्रतिको विद्रोह अन्तिम चरणमा थियो । यसअघिका चलचित्रमा नायक-नायिकाहरू प्रेमकथामा उनिएका हुन्थे । चलचित्रमा न विद्रोह थियो, न त आक्रोश नै । तर, राजेशले चलचित्रमा विद्रोहलाई भित्र्याए ।
उनी तल्लो वर्गका निम्ति सामन्ती शोषक वर्गसँग चलचित्रमा भिड्थे र उसलाई पराजित गर्थे । यसरी उनले गरेका अभिनयमा जनताका दमित कुण्ठा र आक्रोश प्रतिविम्बित हुन्थे । त्यसैले उनका चलचित्रमा निम्नवर्गीय दर्शकले अभिव्यक्ति पाए । गरबि, निमुखाको पक्षमा लड्ने र कथित सामन्ती-शोषकलाई लात्तीमुक्का हानेर ध्वस्त पार्ने उनको शैलीबाट त्यस कोटीका दर्शकले आफ्नो पक्षमा न्याय भएको अनुभूति पाए । त्यसैले राजेश चलचित्रमा अघिल्ला पुस्ताकाहरूलाई छाड्दै अघि बढिरहे ।
"तर, आज पनि मध्यम वर्ग र बौद्धिक जमातबीच राजेश र उनका चलचित्रको प्रसंग कोट्यायो भने मानिसले ओठ लोप्य्राउँछन् । "उनका चलचित्र निरक्षर र प्रायः अर्धशिक्षित समूहमा मात्र लोकपि्रय छन्," सुब्बा भन्छन् ।
तर, एक टेलिभिजन कार्यक्रमले उनलाई 'महानायक'कै पद्वी पनि दिइसकेको छ, जुन उनका लागि नितान्त अशोभनीय थियो । जसलाई प्रकाश सायमीले राजेशको जीवनकै सबैभन्दा ठूलो व्यंग्य मानेका छन् ।
त्यतिबेला नेपाली चलचित्र भुवन केसी, शिव श्रेष्ठहरूको प्रणयात्मक धारमा घँचेटिरहेको थियो । यस्तै परविेशमा कतैबाट फुत्त प्रकट भएका राजेश हमाल नाम गरेका युवाले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एउटा नयाँ धार भित्र्याए । सुरुमै मामा दीपक रायमाझीले केही कारणहरू देखाएर उनलाई नायिका कृष्टिसहित भाग्यरेखाबाट निकालिदिए ।
दीपक रायमाझीले राजेशलाई घोषित रूपमा एउटा र कोठेगफमा अर्को गरी दुईवटा बडेमानका आरोप लगाएका थिए । राजेशलाई पटक्कै अभिनय गर्न आउँदैन, ऊ लाइट फेस गर्न सक्तैन । यो आरोप घोषित थियो । र, दोस्रो अर्थात् अघोषित आरोप अझ संगीन थियो, चरत्रिका सम्बन्धमा । उनले भनेका थिए, उनले सुटिङ् नै बिथोलिने गरी नायिका कृष्टि मैनालीसँग लीला गरे । यी दुई आरोपका साथ कृष्टिसँगै राजेशको पत्तासाफ भयो । यो घटना २०४४ सालको आखिरीतिरको हो ।
पहिलो चलचित्रका पहिला निर्देशकको आरोपहरूलाई यहाँ स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । उनी अभिनय गर्न नसकेको आरोपमा निष्कासित भएका थिए । त्यसबेला जुनसुकै आधारमा उनलाई चलचित्रबाट निकालिएको भए पनि आज १८ वर्षपछि पनि यो आरोप यथावत् रहेको देखिन्छ । सफल व्यावसायिक निर्देशक मानिने प्रकाश थापाले उनलाई पनि आफ्नो चलचित्र अधिकारमा अभिनय गराए तर दोहोर्‍याएनन् । उनी पनि भन्थे राजेशलाई 'माडधाड'बाहेक अभिनय आउँदैन । पछिल्ला निर्देशक नवीन सुब्बा भन्छन्, "उनले जति नै चलचित्रमा काम गरे पनि उनी राम्रा अभिनेता हुन् भन्नेमा चाहिँ मलाई विश्वास छैन ।"
राजेश हमाललाई माझिएको कलाकार मान्नेहरूको जमात पनि ठूलै छ । चल्तीकी नायिका ऋचा घिमिरे राजेशलाई सुपरस्टार मान्छिन् । ऋचा भन्छिन्, "सायद एक जुग पर्खनु पर्छ यस्तो सुपरस्टार पाउन ।" नायक राजेशमाथिको यो आफ्नै निष्कर्षलाई ऋचासँग पुष्टि गर्ने धेरै प्रमाणहरू छन् । शिक्षा, बौद्धिकता, शारीरकि सुगठन, वक्तृत्वकला, पारिवारिक पृष्टभूमिलगायत गुणहरू उनका तर्क हुन् । भन्छिन्, "उहाँ नेपाली चलचित्रको परफ्याक्ट् प्याकेज हो ।"
डेढ दर्जनभन्दा बढी चलचित्रका निर्देशक नारायण पुरी ऋचाभन्दा एक कदम अघि बढेर राजेशको मूल्यांकन गर्छन् । राम्रो/नराम्रो र ठीक/बेठीकभन्दा माथि रहेर राजेशको मूल्यांकन हुन थालेको उनको तर्क छ । चलचित्र 'हिट' भए राजेशलाई कारण मानिन्छ तर फल्प भएचाहिँ निर्देशकलाई दोषी ठहर्‍याइन्छ । अरू पनि धेरै प्रमाण छन् राजेश हमाल निर्विवाद भएको ।
जस्तो तत्कालीन राजाको शासनकालमा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा राजेश निर्वाचनको पक्षमा खुलेरै लागे । विभिन्न मञ्चमा उक्लिएर उनले आफ्नो मत जाहेर गररिहे । तर, उनी अरूजस्तो मण्डलेका रूपमा गनिएनन् । तत्कालीन राजाको हरेक कदमका उनी पक्षपाती थिए । यस्तो विचार राख्ने धेरैले अझैसम्म मुख लुकाएर बस्नुपरेको छ । तर, राजेशको व्यवहारलाई आग्रह/पूर्वाग्रहभन्दा माथि राखेर हेरियो । निर्देशक पुरी पुरानो घटना सम्झिदै भन्छन्, "नांगो फोटो प्रकरणले पनि उनलाई बेफाइदा भएन ।"
वास्तवमै राजेश चलचित्रका हरेक विधाको सवालमा आइडल नै भए । उनी नाच्न जान्दैनन् तर उनले नाचेकै नाच सुहाउँदो भो । अभिनय उनको कहिल्यै खारएिन तर उनकै जस्तो अभिनयलाई अनुकरण गर्नेहरू प्रशस्त छन् ।
उनका हरेक कमजोरी शैलीका रूपमा ग्रहण गरिदएकाले सायद उनलाई आफ्नो गल्ती सुधार्न अवसर नजुटेको हो । यद्यपि, अभिनेताका रूपमा उनले थामेका धर्महरू पनि छन् । जस्तो, उनले कहिल्यै अरू विधामा हात हालेनन् । चलेका धेरै अभिनेताहरू निर्माता/निर्देशक भएका छन् । तर, उनले यो बाटो रोजेनन् । जबकि, निर्देशन उनको रुचिको विषय नै थियो ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ, विदेशी चलचित्रमा काम नगर्ने सवालमा । उनलाई बलिउडबाट निम्तो नआएको पनि होइन । केही वर्षअघि नेपाल आएको मौकामा बलिउडका नामी निर्माता तथा निर्देशक महेश भट्टले राजेशलाई सार्वजनिक रूपमा नै आफ्नो चलचित्रका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उनले भट्टको कुरामा कुनै चासो दिएनन् । र, सबैभन्दा प्रमुख कुरो, उनी कहिल्यै केटी घुमाउने मामिलामा विवादित भएनन् ।
सुरुका दिनमा उनका मामा दीपक रायमाझीले उनलाई छायांस्थलमै प्रेमलीला रचेको आरोप लगाएर निकाले पनि पछिल्ला दिनहरूमा उनी यस्तो आरोप लाग्ने गतिविधिमा सक्रिय भएको पाइएन । चलचित्रमा एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, "नराम्रा कलाकार हुँदैनन्, नराम्रा निर्देशक मात्र हुन्छन् ।" यस आधारमा भन्ने हो भने राजेशको समग्र चलचित्र यात्राको सफलता र असफलताको दोष निर्देशकको हो, राजेशको होइन ।
अभिनेता भुवन केसीका अनुसार, राजेश र उनी एकै सालका हुन् । विक्रम संवत् ०१५ मा जन्मिएको बताउने उनी पहिलापहिला भएको कुराकानीको आधार नै प्रमाण भएको बताउँछन् । त्यसो त यसअघि नै जन्मिएका अभिनेता शिव श्रेष्ठ र संगीतकार शम्भुजित बाँस्कोटा पनि आफूलाई राजेशसँगैको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, सुरुसुरुमा राजेश सही उमेर बताउँथे ।
१६ वर्षअघि काम गरेको चलचित्र देउताका निर्माता तथा अभिनेता युवराज लामाले पनि त्यसताका राजेशलाई उमेर सोधेका थिए रे ! भन्छन्, "उतिबेला गरेको हिसाबको अहिले जोडघटाउ गर्दा उनी अहिले ५१ वर्षको हुनुपर्छ ।" तर, सन् १९६४, राजेशले बताउने गरेको आफ्नो उमेर हो ।
आजका मितिसम्म राजेश हमाललाई सबैभन्दा बढी सोधिने दुईवटा प्रश्नमध्ये दोस्रोको जवाफ हो यो । पहिलो प्रश्न बिहेको हो । यी दुवैको जवाफमा राजेश कहिले अमूर्त बन्छन् भने कहिले छल्नतिर लाग्छन् । त्यसैले फ्यानहरू उनले दिने जवाफमा सन्तुष्ट छैनन् । बिहेका सम्बन्धमा भने उनी कमेडी जवाफ दिएर पन्छिन खोज्छन् ।
एउटा यस्तो समय थियो, जतिबेला राजेश बराबर चर्चामा हुन्थे । पहिलो चलचित्रका रूपमा हस्ताक्षर गरेको भाग्यरेखा -०४४ पुस २७) नायिकासँगको स्क्यान्डलकै कारण उम्कियो । त्यसपछि उनी नांगो फोटो खिचेर चर्चामा आए । नांगो फोटो सार्वजनिक भएपछि उनलाई यस क्षेत्रबाट बिदा गर्नुपर्छ भन्दै चलचित्र क्षेत्रको ठूलै समूह लागिपर्‍यो । कलाकार संघले बहिष्कारको निर्णय नै गर्‍यो । तर, जित उनकै भयो । आफ्नो गाडीले मान्छे किचेर मरेपछि पनि उनले निकै तनावको सामना गर्नुपरेको थियो ।
विभिन्न युवतीहरूसँगको प्रेम सम्बन्ध उनले धेरैअघिदेखि स्वीकार्दै आएका छन् । चण्डीगढ पढ्दा आफूभन्दा केही जेठी युवतीसँगको प्रगाढ प्रेम सम्बन्ध उनले कहिल्यै लुकाएनन् । त्यसको तुलनामा उनी नेपाली नायिकासँगको उठबसका कुरामा बढी गोप्य छन् । पछिल्ला नायिकाहरूसँगको सम्बन्ध टाढा बनाउँदै लगे पनि उनी आफ्नो सुरुवाततिर भने निकै रोमान्टिक थिए । तर, आजका मितिमा उनी पुराना कुरा सम्झिएर कसैको घर भाँड्ने पक्षमा छैनन् ।
सन् १९८५ देखि तीन वर्ष दिल्लीमा मोडलिङ् गरेको उनी बताउँछन् । त्यताका युवतीहरूमाझ उनले बनाएका सम्बन्धहरू भने बेलाबेला सार्वजनिक भएकै हुन् । अहिले उनको गैरचलचित्रकर्मी साथीहरू र त्यसमा पनि विदेशी मित्रहरूसँगको सम्पर्क र सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । उनी सात दिनसम्म चलचित्रको कामबाट खाली बस्नुपर्‍यो भने विदेश भ्रमणमा निस्किहाल्छन् । बेलायत, जापान र रुस उनी धेरैजसो जाने देश हुन् । उनको जस्तो विदेश डुल्ने हैसियत अर्को नेपाली कलाकारले बनाएका छैनन् ।
छायांकन स्थलमा उनको चर्चा भिन्न पारामा हुन्छ । उनी छायांकनमा पुगेपछि त्यहाँको मौसम नै परविर्तन हुन्छ १८० डिग्रीको कोणमा । अनुशासन ह्वात्तै थपिन्छ । सबैले अभिभावक आएझैँ व्यवहार गर्छन् । अघिसम्म कुरा काटेर बस्नेहरू तुरुन्त तारिफमा लाग्छन् ।
रमण घिमिरे/दिवस गुरागाईं, काठमाण्डौ
« Reply #7 on: September 03, 2009, 09:39:36 AM »
« Reply #8 on: October 17, 2009, 04:30:18 AM »
जुवा-तास र पटका पड्काउने कुरा मन पर्दैन - नायक राजेश हमाल
आश्विनी कोईराला, (२०६६ आश्विन ३०, शुक्रवार)
नायक राजेश हमालका पछाडी धेरै फुर्को जोडिने गरेका छन् । जस्तो , नेपालका नम्बर एक नायक, दुई दशकपछी हिरोको इमेज कायम राख्न सफल अर्थात हिरोका रूपमा लामो समयसम्म रूचाईएका नायक, नेपाली चलचित्रको पहिलो व्यवसयिक नायक, आधुनिक, पढेलेखेका, संसार बुझेका एवं रहस्यमयी । ४५ बर्ष काटिसक्दा समेत बिबाह नगरेका कारण राजेश युवापुस्ताको आकर्षणको केन्द्रमा छन् भने समाज, साहित्य, राजनिति एवं नेपाली संस्कृती का बिषयमा वस्तुगत धारणाका कारण उनी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा बिद्वान नायक मानिन्छन् ।
करिब २ सय चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका यी नायक तिहारको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली भूमी अतिक्रमणको बिषयमा आधारित चलचित्र 'दशगजा' को सुटिङमा व्यस्त थिए । सुस्तामा सुटिङ सकेर तिहार मनाउन काठमाण्डौ फर्किएका राजेश हमालसँग तिहारका बिषयमा गरेको कुराकानी यस प्रकार छ -
तिहार सुरू हुने बेला मात्र काठमाण्डौ आईपुग्नु भयो, केमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो ?
- काम त उही चलचित्रको सुटिङ नै हो । पहिले नै आउने रहर थियो तर रहर गरेर मात्र नहुने रहेछ । चलचित्र निर्माण टिम वर्क भएकोले टिमको निर्णय नै सर्वोपरी हुन्छ । हामी नेपाली भुमि अतिक्रमण भएको बिषयमा आधारित चलचित्र 'दशगजा' को सुटिङमा व्यस्त थियौं । त्यहाँको सुटिङ नसकी फर्कदा खर्च बढ्थ्यो, त्यसैले ढिला भएको हो ।
तपाईंका लागि तिहार पर्व हो कि चलचित्र कर्मबाट फुर्सद पाउने उपाए ?
- दुबै हो । यदि म नायक मात्र हुँ भने लगातारको सुटिङ पछी आउने पर्वबाट प्राप्त हुने बिदा मेरा लागि आराम गर्ने बाहाना हो । तर म संस्क्रिति प्रेमी नेपाली हुँ । म कसैको दाजु त कसैको भाई पनि हुँ । घरमुली पनि हुँ । त्यसैले मेरा लागि तिहार महत्वपूर्ण पर्व हो ।
तिहार भन्ने बित्तिकै के कुरा सम्झनु हुन्छ ?
- घरमा देउसीभैलो खेल्ने युवा-युवतीको जमात, लक्ष्मीपूजा र भाईटिका । पर्वका बेला मानिसको भूमीका भिन्न-भिन्न हुन्छ । जस्तो घरमूली भएका कारण लक्ष्मीपूजाको दायित्व र देउसीभैलो टोलीलाई खुसी बनाउने जिम्मा मेरो काँधमा आउँछ । टीकाका दिन म दाजु-भाई भएर दिदि-बैनीसँग टीका लगाईरहेको हुन्छु । तिहार शब्दले यि सबै कुरालाई एकसाथ प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले म यो उज्यालो चाड हो भन्ने गर्छु ।
तपाईं आफै देउसी खेल्न जानु भएको छ ?
- छैन, तर घरमा देउसीभैलो खेलेको मन पर्छ ।
लक्ष्मीपूजा गर्नु हुन्छ ?
- मम्मी हुन्जेल उहाँले बिधिपूर्वक लक्ष्मीपूजा गर्नुहुन्थ्यो । हामी त्यो पूजामा सरिक हुन्थ्यौं । मम्मीको देहान्तपछि मैले त्यो बिंडो थम्नु परेको छ । तर पनि मैले मम्मीले जस्तो बिधिपूर्वक पूजा गर्न जान्दिन ।
तपाईंको बिधार्थीकाल विदेशमा बित्यो, नेपाल फर्किएपछि चलचित्रमा व्यस्त हुनुभयो । यस्तो व्यक्तिम नेपाली पर्वको बारेमा चासो-चिन्ता हुन्छ र ?
- सबैभन्दा ठूलो कुरा संसार हो । हामी पाँच सन्तानलाई आमा-बुवाले आधुनिक शिक्षा दिए पनि नेपाली संस्कार पनि राम्रोसँग सिकाउनुभयो । हामीले त्यसलाई राम्रोसँग ग्रहण गर्न सकेनौं, त्यो अर्कै कुरा हो, तर हाम्रो मन-मस्तिष्कमा चाड-पर्वको महत्व, त्यसमा हाम्रो संलग्नता गहिरो रूपमा रह्यो ।
पहिलो पटक तिहार मनाएको सम्झनुहुन्छ ?
- बुवा पाकिस्तानको राजदुत हुँदा मनाएको तिहार सम्झन्छु । हामी गाईको मासु खाने देशमा गाईको पूजा गरिरहेका थियौं । त्यो अनौठो तर सम्झना योग्य तिहार हो ।
- बुवासँग पाँच रूपैयाँ पाकिस्तानी नोट लिएर दिदि-बहिनीलाई दिएको सम्झन्छु ।
तपाई अध्ययनको क्रममा लामो समय भारतमा बिताउनु भयो, नेपालमा मनाईने तिहार र भारतमा मनाईने तिहारबीच कसरी तुलना गर्नु हुन्छ ?
- भव्यताका दृष्टिले, खर्चका दृष्टिले, झिलिमिली र पटकामा मानिसको रूचिका दृष्टिले भारतको दिपावली भव्य हुन्छ, तर नेपालमा मनाईने तिहारमा जुन आत्मियता हुन्छ, त्यो भारतमा मनाईने तिहारमा हुँदैन । हामी जसरी कागतिहार, कुकुर तिहार, गाईतिहार, गोरूतिहार र भाईटिका मनाउँछौं, त्यो संस्कार भारतमा देखिदैन । यो हिसाबले भारतको साँस्कृतिक पक्ष कमजोर छ । हामीकहाँ सेलरोटी पकाउने, देउसीभैलो खेल्ने, बिधिपूर्वक भाईटिका लगाउने जुन संस्कार छ, त्यसलाई बिचार गर्दा भारतको तिहार खल्लो लाग्छ ।
तपाईं नेपाली भएका कारण आफ्नो देशको तिहार रमाईलो लाग्नु स्वाभाविक नै हो, होईन र?
- नेपाली भएका नाताले सानैदेखि जुन कुरा देखियो, भोगियो, त्यो आफूलाई राम्रो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो, तर पनि विदेशीहरूले हाम्रो पर्वका बारेमा गरेका बिष्लेषणले पनि तिहार महान पर्व हो भन्ने पुष्टि गर्छ । हामी रूसमा छँदा टीका लगाएको, गाई पूजेको, कुकुरलाई सजाएको देख्दा रसियनहरू छक्क पर्थे । हाम्रो पर्वमा जुन मानवीयता छ, त्यो संसारका अरू कुनै पर्वमा छैन । विकसित देशमा बिबाह गरेर गएकी चेलीलाई नेपालमा जस्तो सम्मान गर्ने, पूज्ने चलन छैन । हाम्रा पर्वले हामीलाई ठूलाबाट आशिर्वाद लिन, चेलीलाई सम्मान गर्न, भाई-बहिनीबीच पछिसम्म पनि सम्बन्ध कायम राख्न सिकाएको छ । यस्तो चलन युरोप - अमेरीकाजस्ता विकशित देशमा देखिदैन । यो गर्वको कुरा हो ।
यसपालीको तिहारमा विशेष योजना के छ ?
- पर्वका बेला मेरो विशेष योजना केहि हुँदैन । परिवारले जसरी पर्व मनाउने निर्णय गर्छ, म त्यसमा सरिक मात्र हुन्छु । म हाहा-हुहु गर्ने, नाच्ने, रमाईलो गर्ने, भान्सामा बसेर मीठो खाने जस्ता कुरामा चासो राख्ने मानिस हैन । यसरी हेर्दा म एकलकाँटे जस्तो देखिन्छु, तर म परिवारका सदस्यलाई निरास बनाउने खालको काम पनि गर्दिन ।
तिहारमा सबै भन्दा मन नपर्ने कुरा केहो ?
- मलाई जुवा-तास खेल्ने र पटका पड्काउने कुरा कहिल्यै मन पर्दैन । तिहारका सबै पक्ष राम्रो लाग्छ, तर अरूले मुख्य कुरा मान्ने तास र पटकामा भने म असहयोगी छु ।
तास खेल्नु हुन्न ?
- खेल्दिनँ । म तासमा रमाउन सक्दिनँ । बरू देउसीभैलो खेलेको हेरेर रमाईलो लिन्छु ।
तासको खेल पनि आउँदैन ?
- आउँदैन, अधपी तीनपत्ते फलाँस खेलिन्छ भन्ने थाहा छ ।म्यारिजपनि खेलिन्छ रे, तर त्यो कसरी खेलिन्छ भन्ने चाँहि थाहा छैन ।
गत बर्षको तिहारमा तपाईं अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो तर अहिले नेपालमै हुनुहुन्छ नि ?
- मेरी बहिनी र एउटी दिदी अमेरीकामा बस्छन् । दिदी रेखा र बहिनी रूपाको मन निरास नहोस् भनेर अमेरीका जाने गरेको हुँ । बितेका सात बर्षका तिहार मैले अमेरीकामा नै मनाएँ । यसपटक भने भाई अमेरिकामा भएकोले म नेपालमा बसेको हुँ । नेपालमा ॐ नर्सिङ होममा मेरी दिदी डा रीता हुनुहुन्छ । म अमेरिका हुँदा उहाँको हातबाट टिका लगाउने अवसर पाएको थिईन । यसपटक दिदीको हातबाट टिका लगाउने साईत जुरेको छ । त्यसबाहेक मैले शोभा दिदी सँग नेवारी परम्परा अनुसार टीका लगाउने गरेको छु । त्यसैगरी खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा आश्रित मैनालाई पनि बहिनी बनाएको छु । उनीबाट पनि टीका लगाउँछु ।
एकैपटक तीनवटा टीका कसरी भ्याउनुहुन्छ ?
- टीकाको दिन भ्याईनभ्याई हुन्छ । त्यैपनी म उहाँहरूको मायाले तानिन्छु । यसको सुखद अनुभुति म बर्णन गर्न सक्दिन ।मलाई लाग्छ, जुन आत्मियता हामीबिच छ, यो टीकाले प्रस्फुटन गर्छ ।
अमेरिका गएको बेला यी दिदी-बहिनी त ठगिँदा रहेछन् नि ?
- उता जाँदा यताको गुनासो र यता हुँदा उताको गुनासो सुन्नु पर्छ । तैपनि म भाईटिकाको दिन सबैसँग फोनमा कुरा गर्छु । ईमेल मार्फत शुभकानमा दिन्छु । जाँदा-आउँदा उपहार दिने गर्छु । यसले हाम्रो प्रेम दिगो राख्न सहयोग गर्छ ।
केही चलचित्रमा दाईको भुमीकामा पनि देखिनु भएको छ, जुन आत्मीतया यथार्थमा हुन्छ , त्यो चलचित्रमा उतार्न सकिएन भन्ने लाग्दैन ?
- मैले पालेदाई, अर्जुन, द युगदेखि युगसम्मजस्ता दर्जनौं चलचित्रमा दाईको भुमिका निर्वाह गरेको छु । मैले अभिनय गरेका धेरै चलचित्रमा तिहारको प्रसंग छ । चलचित्र अर्जुनमा जेल परेका दाईलाई भाईटीकाका दिन जेलमै टीका लगाउन आएको प्रसंग छ । नेपाली चलचित्रले हाम्रो सँस्क्रितीलाई प्रस्तुत गरेनन् भन्ने पक्षमा म छैन । हो, मिहिन ढंगले नसमेटिएको होला, तर कमर्सियल चलचित्रले हाम्रो संस्कृतीलाई छुँदै अगाडी बढेको कुराको प्रशंसा नै हुनुपर्छ भने मलाई लाग्छ ।
स्रोत :- साप्ताहिक
« Last Edit: April 17, 2010, 11:40:24 PM by kurakani »
« Reply #9 on: October 17, 2009, 04:31:14 AM »